२०१९ को पहिलो महिनामा यी ४ राशि हुनेहरुलाई धेरै अशुभ !
भर्खरै अंग्रेजी नया वर्ष सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष लाग्दा विभिन्न ग्रहको स्थिति पनि परिवर्तन हुने गर्छ। जसको कारण हरेक राशिलाई फरक-फरक लाभ मिल्छ । ज्योतिष शास्त्रीहरुको अनुसार निम्न उल्लेखित राशिहरुले जनवरी महिनामा सावधान रहनु पर्ने हुन सक्छ।
यस राशि हुनेहरुलाई जनवरी महिना आर्थिक रुपले खासै शुभ नहुने देखिन्छ। धन आर्जन कम भएको अवस्थामा खर्च भने अनियन्त्रित हुनेछ। साथै जनवरी महिना नयाँ कार्य थालनीको लागि खासै शुभ देखिँदैन। निर्धारित कार्य समयमा सम्पन्न नहुँदा परिवारबाट पनि आलोचना हुनेछ। जनवरी महिनामा सकेसम्म यात्रा पनि नगरेकै उचित हुन सक्ला।
जनवरी महिनामा यस राशि हुनेहरुलाई स्वास्थ्यले साथ नदिने देखिन्छ। साथै परिवारको स्वास्थ्यको कारण खर्च मात्र नभई तनाव पनि बढ्नेछ। धेरै समय अगाडी सल्टिएको समस्या फेरी बल्झिन सक्ने हुँदा सावधान रहनु होला। आफ्नो व्यवसायमा कानुनी समस्या हुन सक्ने हुँदा सजक रहनु भएको उचित हुनेछ। जनवरी महिनाभर आफ्नो गोपनियताको ध्यान दिन धेरै आवश्यक हुनेछ।
जनवरी महिनामा यस राशि हुनेहरुले सवारीमा यात्रा गर्दा संयम रहनु पर्ने देखिन्छ। लामो यात्राको योजना रद्द गरेको उचित हुनेछ। जनवरी महिनामा प्रेम सम्बन्धको कारण तनाव बढ्नेछ। साथै परिवारमा पनि वातावरण उचित नहुँदा दैनिकीहरु पनि प्रभावित हुनेछ। मकर राशि हुनेहरुले यस महिना आर्थिक रुपमा लगानी नगरेकै उचित हुन सक्ला।
जनवरी महिनामा धनु राशि हुनेहरुलाई आफ्नै भनिएकाहरुबाट असहयोग हुने देखिन्छ। आफ्नो काममा अरुबाट कुनै पनि सहयोगको अपेक्षा नगर्नु होला। आफ्नो क्रोधको कारण सामाजिकमा पनि नराम्रो छाप पर्नेछ। यस महिना धनु राशि हुनेहरुलाई आफ्नै व्यवहारको कारण पछुत्तो हुनेछ। सरकारी पक्षबाट तपाईको व्यवसायमा हस्तक्षेप हुनेछ।
साउथ फिल्म उद्योगका ती ६ अभिनेत्री जो अहिलेसम्म छन् कुमारी । को- को हुन् त ?
खानी दुर्घटनामा भारतमा दुईको मृत्यु, १५ वेपत्ता